राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेपालगञ्जमा -
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेपालगञ्जमा
नेपालगञ्ज, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक राजेन्द्र लिङ्देन पश्चिम नेपालका जिल्ला भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । बिहिवार दाङको तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएका अध्यक्ष लिङ्देन शुक्रबार नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्नुभएको छ ।
राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनका लागि लिङ्देनसँगै अभियान चलाउनुभएका राप्रपाका महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा नगर प्रमुख रहेको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको बारेमा अध्यक्ष लिङ्देनले विभिन्न विषयमा जानकारी लिनुभयो । लिङ्देन राप्रपाबाट प्रतिनिधीसभामा निर्वाचित एकमात्र सांसद हुनुहुन्छ ।
स्थानीय तहमा उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकामा राप्रपाबाट नगर प्रमुखको रुपमा विजयी डा. राणा पनि एकमात्र जनप्रतिनिधी रहनुभएको छ । राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनको अभियान चलाएर डा. राणा र लिङ्देनले महाधिवेशनमा लामो समयसम्म पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका कमल थापालाई पराजित गर्न सफल हुनुभएको हो ।
राप्रपा अध्यक्ष राणाले नेपालगञ्जमा पार्टीका केन्द्रीय तथा प्रदेश र जिल्ला स्तरीय नेताहरुसँग पनि छलफल गर्नुभएको राप्रपाका युवा नेता विरेन्द्र रावतले जानकारी दिनुभयो ।
Previous articleभिमसेनको अध्यक्षतामा बर्दिया युनेस्को क्लब टपराको गठन
Next articleबालिकालाई बिद्यालयमा टिकाउनका लागि नितीगत संबाद सम्पन्न